people Nepal » यसरी हुन्छ पाँच दिनमा अभूतपूर्व नयाँ जीवन ! यसरी हुन्छ पाँच दिनमा अभूतपूर्व नयाँ जीवन ! – people Nepal
यसरी हुन्छ पाँच दिनमा अभूतपूर्व नयाँ जीवन !
Posted on December 16, 2019 by Durga Panta
हामी सफलताका लागि भौंतारिइरहेका छौं । सफल व्यक्तित्व विकासका लागि दौडधुप गरिरहेका छौं । तर हामीले खोजेका कुराहरु धेरै टाढा छैनन् । यो हाम्रो आनीबानी र जीवनशैलीसँगै छ । मात्र हामी कस्तुरी बनेर बासनाको खोजीमा भौंतारिइरहेका छौं । कसैले श्री रवि शंकरलाई सोधे– ‘हाम्रो व्यक्तित्व कसरी विकास गर्ने ?’
श्री रवि शंकरले यसरी जवाफ दिएको यो जवाफले तपाईलाई पनि बदल्न सक्छ । आउनुहोस्, केवल पाँच दिन अभ्यास गरौं ।
व्यक्तित्व विकासको लागि तपाईंले मात्र पाँच दिन बिताउनुपर्छ । यी पाँच दिनका पाँच अभ्यासले तपाईंको जीवन निश्चय नै फुल्ने छ, खुल्ने छ ।
तपाईंको व्यक्तित्व विकास गराउने ती पाँच अनुभूवहरु यस्ता छन्, जसलाई तपाईंले ध्यानपूर्वक खेल्नुपर्दछ ।
१. तपाईंको लागि मैले सिफारिस गर्ने पहिलो भूमिका हो, विद्यालयको शिक्षक/शिक्षिका ।
सिकाउन गाह्रो हुने बालबालिकालाई सिकाउनुहोस्, जहाँ तपाईंलाई धैर्यताको जरुरत पर्दछ । नर्सरी वा प्राथमिक शिक्षक/शिक्षिका बनेर एक दिनलाई भनेपनि पढाउँदा कति धैर्यता बढ्दछ, तपाईंले एक दिनमै थाहा पाउनुहुनेछ ।
२. एक दिनको लागि माली अथवा किसान बन्नुहोस्
तपाईं बिउ छर्दै हुनुहन्छ अथवा बिरुवामा सिंचाई गर्दैहुनुहुन्छ ? तपाईंले यहाँ पानी, पृथ्वी र वातावरण जोगाउन कति ध्यान दिनुपर्छ, कति संवेदनशील बन्नुपर्छ थाहा पाउनुहुनेछ । तपाईं वातावरण भनेको के हो अनुभूत गर्नुहुन्छ । तब तपाईंले खाद्यान्नलाई महत्व दिनुहुनेछ र खानेकुरा फाल्नुहुनेछैन ।
तपाईंलाई थाहा छ, हामी के गर्छौं ?
हामी धेरै खानेकुरा लिन्छौं, र यसलाई हामी फ्रिजमा राख्छौं । केही दिनपछि हामी फेरि रेफ्रिजेरेटरमा राख्छौं र खानेकुरा फाल्छौं । हामीले हरेक दिन लाखौं लाखौं टन खानेकुरा फाल्छौं । हामीले खानेकुरा फाल्नुहुँदैन । हामीले एक दिनका लागि मात्रै भनेपनि किसान वा माली बनेर यो कुरा सिक्न सक्छौं ।
३. मानसिक अस्पतालमा एकदिन बिताउनुहोस्
मानसिक अस्पतालमा बिरामीहरुले जे जे कुरा गरेपनि नराम्रो नसोच्नुहोस् ।
उनीहरुले गाली गर्न सक्छन्,
उनीहरुले तपाईलाई विभिन्न आरोप लगाउन सक्छन्,
उनीहरुले श्राप दिन सक्छन्,
तपाईंले आपत्ति प्रकट गर्नुहुन्छ र ?
तपाईं आपत्ति मान्नुहुन्न, किनकि तपाईंलाई थाहा छ कि उनीहरु मानसिकरुपमा बिरामी छन् । तपाईंलाई थाहा छ, धेरै मानिसहरु अस्पताल बाहिर हुन्छन्, तर यसको अर्थ यो होइन कि अस्पताल बाहिर हुने सबै मानिसहरु मानसिक रुपमा ठिक छन् । यसकारण, जीवनमा तपाईंलाई कसैले बिना कारण दोष लगाउन सक्छन्, उनीहरुले रिस गर्न सक्छन्, डाह र ईश्र्या गर्न सक्छन् । अर्थ न वर्थका कुरा गर्न सक्छन् । यसपछि, तपाईलाई थाहा छ, यिनीहरुलाई हाँसेरै कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सीप र धैर्यता तपाईले हासिल गर्नुहुनेछ । यसपछि तपाईंले अनावश्यक कुरा दिमागमा थुपारेर दिमाग खराब गर्नुहुनेछैन ।
यसकारण यदि तपाईंले एक दिन मानसिक अस्पतालमा बिताउनुभयो भने, मष्तिष्कलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा जान्नु हुनेछ । र, तपाईं अरुका विचारको फुटबल हुनबाट बच्नुहुनेछ ।
४. एकदिन तपाईं जेल जानै पर्छ । हुनसक्छ, यसबाट तपाईंलाई राम्रै झट्का लागोस्
जेल जानलाई तपाईंले नराम्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन । जेल यत्तिकै पनि घुम्न जान सक्नुहुन्छ । कैदीबन्दीहरुसँग केही समय बिताउनुहोस् ।
तपाईंले दया र करुणा भनेको के हो, गहिरोसँग बुझ्नु हुनेछ । सहयोगविहिनता भनेको के हो, बुझ्नुहुनेछ ।
सचेतनाको अभावमा गल्ती गर्ने मानिसहरु अहिले जेलमा छन् ….. र अहिले त्यसको मूल्य चुक्ता गरिरहेका छन् ।
यसबाट तपाईं आफ्नो काममा सचेत (सावधान) रहन सक्नुहुनेछ ।
५. एक दिन मृत्यू कुरिरहेका अस्पतालका बिरामी सँग बिताउनुहोस्
यहाँ तपाईंले जीवन कति मूल्यवान छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुनेछ ।
र तपाई आफ्नो स्वास्थ्यप्रति हेरचाह गर्न सुरु गर्नुहुनेछ । राम्रो खानुहुनेछ, व्यायाम सुरु गर्नुहुनेछ । र, जीवनमा अझ गतिशील हुन गर्नुपर्ने सबै कुराहरु गर्नुहुनेछ ।
यी पाँच दिनहरु बिताइसकेपछि नतिजा के आउला ?
मलाई लाग्छ, यी पाँच दिनहरुमा अझ गतिशील हुनुहुनेछ, अझ जीवन्त हुनुहुनेछ, अझ प्रेममय, करुणामय र सक्रिय हुनुहुनेछ ।